Eminyakeni yamuva, amanzi amapaki zithandwa kakhulu hhayi kuphela e-US, lapho yasungulwa ukuzijabulisa, kodwa futhi emhlabeni wonke. BaseYurophu cabanga evakashele isikhungo a imfanelo esiyisibopho indlela yokuphila enempilo. Ethandwa kakhulu kukhona amapaki amanzi, kuhlangene yezitolo ezinkulu (yezitolo). Lapha, izivakashi achitha usuku lonke kumnandi, ngokuhlanganisa Uzalo kuma-slides amanzi namakilasi emakamelweni umdlalo nokuningi. D.
Esanda kutholakala, amanzi amapaki ziye zanda kakhulu eRussia. Cishe zonke izici emzaneni WaseRussia has a Luhambo amanzi anjalo. Cishe njalo, zisuthe ngokuhle izivakashi. Ngokusho ukubuyekezwa, epaki amanzi e Shelekhov (idolobha elisezweni lase-esifundeni sase-Irkutsk.) Ingabe ayikho into okuthiwa ihlukile. Usuku kuvulwa kwepaki yamanzi Shelekhov - Februwari ka-2002. Ukuvakashela leli Water Luhambo sekuyisikhathi eside lidumile bendawo abeza lapha nganoma iyiphi inkathi.
Mayelana udumo epaki amanzi e-Shelekhov
Uma ungazi lapho Shelehov kungaba ngempumelelo futhi ejabulisayo yokuzilibazisa ngempelasonto nomndeni wakho, qiniseka ukuthi ukuya epaki yamanzi endawo. Waterpark Shelehov (izithombe ethulwa esihlokweni) itholakala ku: 20 ikota, 100, st. "Builder" ku MUP idolobha "kahle isikhungo." Lesakhiwo siyonikeza yokuchitha isizungu ezithakazelisayo wonke umuntu.
Umama nezingane kungaba zingena echibini noma ezikudingayo sauna, futhi ubaba ujabulele umdlalo amabhiliyade noma Amazing in the gym, futhi ugogo inganikeza ngivakashele ihhovisi wamazinyo noma umbhucungi womzimba.
Kuyaziwa ukuthi azikho evulekile Shelehov imizimba amanzi esingokwemvelo, esaziwa, ngakho lo mdlalo ngokushesha ayedumile nokuduma phakathi bendawo, kanye izakhamuzi zendawo. Futhi lokhu akumangalisi. I-aqua epaki yithuba elikhulu ngawo wonke umuntu ukuba abe yokuzilibazisa isikhathi omkhulu nomkhaya wakhe.
Ngaphandle amachibi lapho ukubhukuda futhi bathande izingane kanye nabantu abadala, ingqalasizinda yamanzi epaki sihlanganisa Jacuzzi nge Hydro massage and sauna. On insimu yonke isikhungo ukuzijabulisa usebenza-Wi-Fi. Amanzi epaki futhi inezidingo yokupaka yayo khulula. Kukhona amabhiliyade, umphakathi sokuqasha, ukugeza ofeleba, uwumnikazi wenkampani namathoyizi inflatable.
Okufanele ukwenze nge izivakashi abasebasha?
Uma izivakashi basebancane futhi engazi ukuthi ukubhukuda kanjani, futhi abazali bafuna ukubalekela izinkathazo futhi uphumule kancane, ungakwazi ushiye izingane egumbini yezingane nge elithambile "ukukhuluma" igama "Uyayobayobeka" ngaphansi kokuqondisa ubuthisha. Zibonisa konke okudingayo ukuze ube mnandi futhi ezithakazelisayo yokuchitha isizungu ingane. Ngokwesibonelo, slide, esehlela ichibi elithiwa ongasuthi ngamanzi, futhi ubuhlalu. Le sevisi kuyancomeka yizivakashi.
Ngo epaki amanzi (Shelekhov) ahlinzekwa amachibi eziningana. Komunye wayo, wena umane uya kobhukuda, elinye - ride nge omunye amaslayidi ezimbili. Lokhu pool nayo ifakwe emithonjeni Illuminated, okubangela injabulo engachazeki ezinganeni.
Ngokushesha ngaphambi kokuvakashela amanzi echibi epaki, bonke izivakashi ngizodabula lapho ngihlolwa. Lena imfuneko zonke izimenywa ngenxa isidingo aqinisekise ukuphepha kwezingane ezihlukunyeziwe kokubili izingane nabesifazane abakhulelwe.
Aquapark Shelehov wusizo for ladies ku NgoLwesibili noLwesine, kusukela 17:45 kuya 18:45, they mema aerobics. Ngaphezu kwalokho, amakilasi kwabesifazane abakhulelwe. Ukuthi izingane musa uthole nesithukuthezi ngenkathi behileleka omama, zingase elithunyelwe ivulekile amageyimu kumnandi Maze. Kulabo abafuna ukufunda ukubhukuda noma uthuthukise amakhono akhona umbhukudi epaki amanzi Shelekhova ku NgoLwesibili noLwesine kusuka 9:45 kuya 17:45 ukuziphatha ukuqeqeshwa ezifanele.
Isibalo izivakashi lilawulwa ngasechibini kusengaphambili, ngakho-ke akakaze aminyene. Ngemva ngokuluhlaza ageza amanzi ipaki Shelekhova ungavakashela solarium, mpo noma okuvundlile, bese isidlo esihlwabusayo at a cafe wendawo, imenyu okuyinto njalo eziningi izitsha zezingane.
Ngenzenjani kudingeka baphathe?
Ofisa ukuvakashela ipaki amanzi kufanele agodliwe:
ekushintsheni izicathulo zakhe;
Musa ngicasuke uma into kusuka kulolu hlu engekho. Kulahleke kungaba kuqashwe. ngihlolwa nayo eyenziwa ngaso leso sikhathi.
Esikhathini kahle isikhungo izivakashi bamenyiwe ukujabulela ezinye ukubhucungwa (idinga ukubhaliswa kwangaphambilini):
Ngaphezu kwalokho, onguchwepheshe angakwazi promassirovat inkinga ezindaweni:
Izitho zomzimba zangaphasi ziyakhula;
Kulabo abafisa ibhekane zokwelapha has a kusofa massage, massage esihlalweni kanye ongaphakeme-imvamisa ibhande myostimulation.
Shelekhov, epaki amanzi: ukusebenza
Leli chibi lingamamitha evulekile kusukela ngo 10:00 kuya 22:00. Amanani amathikithi epaki amanzi zincike usuku kanye nesikhathi ukuvakashelwa. Ticket izintengo ngezinsuku zeviki kusukela ngo 10:00 kuya 19:00 nangezimpelasonto kanye namaholidi kusukela ngo 10:00 kuya 12:00 kuyinto ruble 150 ngehora. Kusukela 19:00 kuya 22:00 ngezinsuku zeviki futhi kusukela ngo 12:00 kuya ku 22:00 ku ngezimpelasonto namaholidi kuyodingeka bakhokhe ezibizayo - 350 ruble ngehora.
Izingane kuze iminyaka 5 phezu isethulo yesitifiketi sokuzalwa noma ikhophi ufakwa khulula.
Ikhokhelwa njengoba ofeleba sokuqasha, imibuthano, njll, ngihlolwa saziso, ejimini, igumbi zezingane futhi amabhiliyade. izindleko:
ukuqeqeshwa ejimini instruktora- ruble 120 ngaphandle kobukhona.
ruble 1000 abonementa-. I-10 h;
izifundo nge instruktorom- 150 deda.
abonementa- 1300 deda. amahora 10;
solyariya- ruble angu-15. imiz ngalinye.;
bilyarda- 150 deda.
Vakashela amageyimu amakamelo-120 deda.
ngihlolwa (ngaphandle Ukukhishwa izitifiketi) - 20 deda.
imikhiqizo iphuma (amathawula, Slippers, izigqoko, amashidi, izindandatho enjoloba, ukuphila jackets, amathoyizi kanye nezinye izinto) - ruble angu-30. per unit.
Labo nesithakazelo ukuvakashela ipaki amanzi ngempelasonto kumele ungenele kusengaphambili. Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-3 ubudala ungeniswe pool kuphela uma kukhona inabukeni waterproof (iyatholakala ku-Centre). I wechibi izingane ukujula - kufike ku-80 cm.
Izivakashi ngokuyinhloko ukuhlala epaki amanzi Shelekhova besabela kahle kakhulu. Izivakashi uthande ukuza lapha njengomkhaya ngamaholide nangezimpelasonto. Ababhali amazwana uqaphele ukuthi epaki amanzi Kuyathakazelisa kokubili izingane kanye nabantu abadala. Ezinye izivakashi ukukhuluma ivakashele ipaki amanzi ngendlela engafanele. Kodwa izilinganiso zabo ezabaninizo kakhulu. Ezinye unganelisekile ukuziphatha izivakashi ngasinye, kuyilapho abanye cabanga intengo kuphakeme, njll
Empeleni, ababhali sizivuma Izibuyekezo ukuthi kukhona okuyisisekelo-isikhungo ukuzijabulisa. Abantu abaningi efana yokuthi epaki amanzi Shelehov ungalokothi ngokweqile aminyene. Ukuphatha elawula ngokucacile ekukhishweni kwemithetho esungulwe, ukuze izivakashi babe induduzo edingekayo ukuze bathole ukuphumula. Ababhali amazwana ukwaneliseka ukuba khona lapho ngihlolwa saziso, kanye umbiko ukuphepha ukugeza kulezi amachibi izingane futhi omama abakhulelwe (amanzi uhlelo lokuqinisekisa ukuthi uhlanzekile epaki amanzi engabondli abakubo chlorine).
Water Park Ezivamile shayela Shelekhova izakhamuzi nezivakashi ngokuvamile hlela bona iholidi ojabulayo nempilo futhi bazimisele uzijabulisa kule sikhungo ukuzijabulisa isibe umkhaya wangempela isiko bendawo.
Wadduwa, Sri Lanka: sezulu, amahhotela, ukubuyekezwa
Ogwini best of Vladivostok. Izithombe kanye nokubuyekeza
The best ekamu isayithi Karelia: incazelo, izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Czech National Ukudla On Green Woche (Green Week)
Yini igama Alex? Umsuka kwegama Alex. Imfihlakalo nomlando igama. abantu eqaphelekayo enegama Alex
Isichuse "ingulube" - a imfashini odongeni Uthwale
Low-amandla indlu - kuyini?
Tempering e sabaqalayo noma ingane enempilo ingqondo enempilo nomzimba